Dowladda Uganda oo Ciidamo Cusub u soo doreysa Soomaaliya - Awdinle Online
Dowladda Uganda oo Ciidamo Cusub u soo doreysa Soomaaliya
Ugu yaraan 1,300 Askar ka mid ah Ciiddanka Kaydka Uganda ayaa looga yeeray Xarunta Singo ee Taageerada Tababarka Nabadda (Singo Peace Support Training Centre), kuwaasi oo loo soo daad-gureyn doono Somalia bisha October ee sanadkan.
Ciiddanka Difaaca Uganda ee UPDF waxay qorsheynayaan inay Somalia u soo diraan 2,752 Askarta Kaydka, kuwaasi ooSomalia loo soo daabuli doono inta u dhexeysa bisha October ilaa bartamaha sanadka soo socda ee 2022-ka.
Ciiddanka Kaydka Uganda Reserve Forces waxaa horey loogu yeeray bishii Janaayo ee sanadkan, iyadoo loo sii marsiiyey Taliyaha Ciiddankaas Kaydka, Sareeye Guuto Charles Awany Otema.
Ku-xigeenka Afhayeenka Ciiddanka Uganda, G/Sare Der Akiiki oo la hadlay Wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa magaalladda Kampala waxa uu sheegay in ciiddanka Kaydka ee looga yeeray Xarunta Singo ay noqon doonaan Kooxda Dagaalka ee 34-aad (Battle Group 34), kuwaasi oo la siinayo tababar muddo 6-bilood, kadibna loo daabuli doono Somalia.
Si kastaba ha ahaatee,Uganda waxaa haatan Somalia ka jooga 6,000 oo Askari, waana tirada ugu badan ee Ciiddanka qeybta ka ah Hawlgalka Nabad-ilaalinta ee AMISOM.
Previous articleWajiga labaad ee Shirka wadatashiga doorashooyinka oo Muqdisho ka furmay
Next articlePuntland & Jubbaland oo qaadacay Shirka Guddiga farsamo uga furmay Muqdisho